वीरगन्जको अवस्था भयावह « Sajilokhabar
वीरगन्ज, १७ साउन । वीरगन्जमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्ला दुई दिनमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार वीरगन्ज महानगरपालिका- १६ का ३५ वर्षीय युवक, वीरगन्जको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सीईओ ५६ वर्षीय पुरुष र वीरगन्ज २ का ७० वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो ।
मास टेस्टिङमा संकलन गरिएका स्वाबमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको पोजेटिभ रिपोर्ट आइरहेको नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिडेन्टेण्ड (मेसु ) डा. मदन उपाध्याय बताउँछन् । कोभिड अस्पतालमा संक्रमित राख्ने ठाउँ नहुँदा एक सय २६ जना संक्रमितलाई घरमै राखिएको छ। ५० बेड मात्रको कोभिड अस्पतालमा बेड खाली नहँुदा पछिल्लो पटक संक्रमण फेला परिरहेकालाई घरमै होम आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका कोर्डिनेटर डा. उदयनारायण सिंह बताउँछन् ।
सीपीएल खेल्न गएका क्रिकेट सन्दीप १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने
काठमाडौँ, १९ साउन । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्नका लागि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो गएका नेपाली
काठमाडौँ, १९ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट दुई अन्तरिक्ष यात्रीलाई लिएर अमेरिकी अन्तरिक्ष यान आइतबार